‘काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेकाे वास्तविक तथ्याङ्क दुई या तीन गुणा धेरै’ – Shasankhabar
‘काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेकाे वास्तविक तथ्याङ्क दुई या तीन गुणा धेरै’
शुक्रबार, ०७ जेठ २०७८
ऐजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेकाे वास्तविक तथ्याङ्क जति आधिकारिक रूपमा बताइएकाे छ त्याेभन्दा दुई या तीन गुणा बढी रहेकाे बताएकाे छ ।
सङ्गठनका अनुसार आधिकारिक रूपमा विश्वभर अहिलेसम्म काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमणका कारण ३४ लाख जनाकाे ज्यान गइसकेकाे छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकाे तथ्याङ्कअनुसार आफ्नाे वार्षिक प्रतिवेदनमा काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या ६० देखि ८० लाखबीच हुन सक्ने बताएकाे छ ।
प्रतिवेदनकाअनुसार सन् २०२० मा काेराेना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या कम्तीमा ३० लाख या बताइएकाे भन्दा १२ लाख धेरैकाे ज्यान गएकाे छ । ‘प्रत्यक्ष रूपमा हाेस् या फेरि अप्रत्यक्ष रूपमा काेभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउनेकाे तथ्याङ्क वास्तविक मृत्युकाे तथ्याङ्कभन्दा निकै कम छ’, प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकी प्रबन्ध निर्देश समीरा अस्माले भन्नुभयाे, ‘वास्तवमा ज्यान गुमाउनेकाे तथ्याङ्क दुई या तीन गुणा धेरै हुन सक्छ । याे तथ्याङ्क ६० देखि ८० लाख छ ।’
तथ्याङ्क कम हुनुमा यसका विभिन्न कारण हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएकाे छ । सङ्गठनकाअनुसार महामारी सुरु हुने बेलामा कैयाैँ व्यक्तिकाे मृत्यु उनीहरूमा काेभिड–१९ पुष्टि हुनुभन्दा पहिले नै भएकाे थियाे ।
साथै केही देशसँग त्यस समयमा काेभिड–१९ का कारण हुने मृत्युसँग जाेडिएकाे डाटा राख्नका लागि उचित प्रक्रियासमेत नभएकाे सङ्गठनले बताएकाे छ ।
चितवनमा असार १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा : के खुल्ने के नखुल्ने ?
चितवनमा असार १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
चितवनमा ८९ कोरोना संक्रमित थपिए, १२७७ जना आइसोलेसनमा : कुन पालिकामा कती ?
चितवनमा करोडौँ आम्दानी गर्नेहरु मर्सिडिज कार चढेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडा धाउँछ
मलेसियामा लकडाउन थप दुई हप्ता थपियो
एक महिलाबाट एकैपटक जन्मिए १० सन्तान
चीनमा तीन वर्षमाथिका बालबालिकालाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति
पाकिस्तानमा दुई वटा रेल ठोक्किँदा ३० जनाको ज्यान गयो
डब्ल्यूएचओले कोरोनाका भेरियन्टलाई नामाकरण गर्ने
चीनमा तीन सन्तानकाे अनुमति प्रदान
कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाटै बाहिरिएको हुनसक्छ – बेलायत